Raa’sulwasaaraha Dalka oo hambalyo u direy maallinta haweenka soomaaliyeed | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Raa’sulwasaaraha Dalka oo hambalyo u direy maallinta haweenka soomaaliyeed
Raa’sulwasaaraha Dalka oo hambalyo u direy maallinta haweenka soomaaliyeed
Ra’isul wasaaraha Jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa hambalyo u diray haweenka Soomaaliyeed oo u dabaal degaya maalinta haweenka dunida.
Mudane Xasan Cali Kheira ra’isul wasaaraha jahuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku tilmaamay haweenka Soomaaliyeed in ay yihiin kuwa ku guuleystay arrimaha qoyska iyo u adeegidda nabadda iyo horumarka.
“Maalintan Caalamiga ah ee haweenka, dumarka Soomaaliyeed waa ay mudan-yihiin in lala dabaal dego maadaama ay u dhabar adeegeyn u adeegidda dalka, waa kuwa iyaga ku guuleystay maareynta qoyska iyo u adeegidda nabadda iyo horumarka ” ayuu yiri ra’isul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Madax kala duwan ayaa hambalyo u diray haweenka Soomaaliyeed oo uu kamid yahay ra’isul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya, wakiilada beesha caalamka u joogo Soomaaliya iyo madax kale.
8- March sanad kasto ayaa dunida looga dabaal degaa maalinta haweenka dunida iyadoo Soomaaliya ay ka dhacayaan munaasabado lagu weyneynayo maalintan.
Previous articleMr: Keating oo booqday wasaaradda Maaliyadda.
Next articleRa’iisal wasaaraha Soomaaliya oo la kulmey madax ka tirsan Dowladda Mareykanka